Hiavaka no ho ny isan-taona: homarihina amin’ireo Alliances 17 ny “Fetin’ny Mozika” | NewsMada
Hiavaka no ho ny isan-taona: homarihina amin’ireo Alliances 17 ny “Fetin’ny Mozika”
Ho hetsika hanandratana ny mozika sy ny mpanakanto. Tsy mivaona amin’izay ny fanao maneran-tany, ho fanamarihana ny “Fetin’ny Mozika”. Ho an’ny eto Madagasikara manokana, hiavaka ny amin’ity taona ity satria tsy ny 21 jona fotsiny ihany ny homarihina izany fa mandritra ny herinandro manomboka ny 14 jona. Tsy vitan’izay, hampitaina amin’ny alalan’ny teknolojia amin’ireo tambajotran-tserasera sy handeha amin’ny fahitalavitra izany, noho ny mbola famerana ny isan’ny afaka manatrika mivantana ny fampisehoana.
“Efa an-taony maro ny nanamarika ny “Fetin’ny Mozika” ny tambajotran’ny Alliance française eto Madagasikara. Mpanakanto aman-jatony ny efa nandray anjara ka tao ireo vao nisondrotra nampiana hahazo sehatra, ary maro koa ireo efa malaza no afaka nizara ny kantony. Noho ny zava-misy iaraha-miaina, nampitain-davitra fotsiny ny fanamarihana tamin’ny taon-dasa. Amin’ity kosa, hotanana ihany izay, saingy hivelatra bebe kokoa satria hisy seho avokoa manerana ireo Alliances françaises 17”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Alliance française eto Antananarivo, Raharinosy Monique, omaly, tetsy Andavamamba.
Ho tontosa vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Telma sy ny tambajotran’ireo Alliances françaises ny hetsika amin’ity. “Maro ireo hetsika zavakanto notohanan’ny Telma, hatramin’izay. Misy ireo nanosika sy nampahafantatra ny talenta vao. Tao koa anefa ireo nanasongadina ireo efa anatin’ny laza teto ka hatrany ivelany. Hotohizana hatrany izany, ary mifanandrify amin’ny tanjon’ny Telma rahateo ny fisehon’ny hetsika amin’ity. Efa miroso amin’ny hetsika ampitain-davitra kanefa manaraka ny fenitra isika”, hoy kosa ny nambaran-dRamaroson Rado, tompon’andraikitry ny fiaraha-miasa ivelany ao amin’ny Telma.
Tsy àry ho voatanisa, raha ireo tarika sy ny mpanakanto handray anjara amin’ireo tanàn-dehibe 17 amin’ity. Hosinganina manokana kosa ny ao Antsirabe, handray an-dry Faniry Quartet ny 12 jona, i Mamy Bastah, i Jesus Soldiers ary i Samöela kosa ny 19 jona.
Ho an’AFT Andavamamba kosa, fantatra fa handray anjara ny tarika Ambondrona, Fy & Reko hisy Band, Gaëlle, sns.